Nightshade jam: eji, uzommeputa nkwadebe nzọụkwụ site nzọụkwụ, foto - Berry - 2020
Esi esi nri nke nightshade jam: uzommeputa
Ndị mmadụ amarala oge banyere ọgwụ na ihe oriri nke black nightshade ma mụta otu esi eji osisi na mkpụrụ osisi na nkà mmụta ọgwụ eme ihe, yana ịme nri, nchebe, jam na ihe ndị a ga-eji esi na tomato. N'isiokwu a, anyị ga-akọwa otú ị ga - esi mee ka jam si na mkpụrụ ndị a, nakwa maka uru ọ bara maka ahụ.
Uru nke nightshade
Nri jam nzọụkwụ site nzọụkwụ
Ntụziaka nke nightshade jam na ihe ndị ọzọ
Nightshade jam na lemon zest
Nightshade Jam na Quince
Ihe ị ga-enye
Nightshade bu akwukwo ahihia kwa afo ruo otu mita n'ogologo, nke a na-achọta ebe nile na mpaghara Eurasia, ma e wezụga maka mpaghara ugwu. Ebe kachasị amasị ya - ubi, ubi mkpụrụ osisi, ala arable, mmiri mmiri. Osisi ohia na-ewu, branched, ubé pubescent. Enwere mpempe akwụkwọ ntanetị dị ogologo ruo 13 sentimita n'ogologo ma ruo 8 centimita n'obosara.
Obere okooko osisi na-acha ọcha dị iche iche na-ejikọta ya na ụbụrụ dị iche iche. Mkpụrụ osisi na-acha oji, mgbe ụfọdụ na-acha ọcha ma na-acha akwụkwọ ndụ, gburugburu, ruo 1 cm n'ịdị elu ma dị nnọọ nro. Oge ezumike - ọnwa okpomọkụ nile, mkpụrụ osisi amalite na July ma gwụchaa n'October.
Ọ dị mkpa! Akuku nile nke blackshade ojii, ma e wezuga ya n'omume nile, nwere ihe ojoo, ya mere ndi mmadu ejiri osisi a di adighi anakwere. A ga - eji ọgwụ dọkịta na - eme ndokwa maka osisi a, ọ ga - ewepụkwa ha kpamkpam dịka usoro ọgwụgwọ ahụ si dị.
Achọpụtara ihe dị n'ime ihe ndị dị na tomato, ahịhịa na epupụta nke osisi ahụ:
agba na tannins;
Dulkamarin (ilu glycoside);
glycoalkaloids (solanine, solacein).
Chọpụta ihe dị mma nightshade na ihe dịgasị iche iche nke ịgha mkpụrụ n'ụlọ.
N'ihi ụdị ọgwụgwọ ya, a na-ede nightshade n'etiti osisi ọgwụ. Mkpụrụ nwere ihe na-esonụ na-agwọ ọrịa Njirimara:
Dị ka nightshade nwere ihe ndị na-egbochi njehie: ọlaọcha goof, barberry, Rhodiola rosea, ahịhịa ala, blackberry, viburnum, cornel, heather, sloes.
Na-eri tomato, nakwa akụkụ nke osisi ahụ dị n'elu n'ụdị decoctions, infusions na ihe ọṅụṅụ na-atụ aro maka ọrịa ahụike na-esonụ:
ọrịa nke usoro genitourinary;
nsogbu usoro ihe egwu;
ọrịa oncological ọbara (arịa ọrịa leukemia);
ọ na-agba ọsọ.
Ugbo si na epupụta nke ọgwụgwọ ọgwụ:
ọnya afọ na ọnyá na-emegharị.
Ị ma? Onye prọfesọ Bekee bụ Vik Morris (Institute for Food Research, UK) gosipụtara ikike nke pectins dị na apple jam, plums, apricots, currants na blackshade iji gbochie mkpuru nke ọrịa cancer, na-enweta protein nke galectin-3 na ha.
Ihe oriri bara uru a na-akọ n'elu osisi nwere ihe oriri sitere na ya, karịsịa, jam na-edozi ahụ. N'ọtụtụ nchịkọta nke usoro mmụta ọgwụ na nkà mmụta ọgwụ, a gwara ya ka ọ na-eri nri kwa ụbọchị ruo pasent ise nke jam site na mkpụrụ osisi ndị a dị nro na ihe ndị na-esonụ:
asacha ahụ nke toxins;
dị ka ụda igwe n'ozuzu;
usoro mgbali ọbara;
dịka ihe ngwọta maka afọ ntachi;
dị ka mgbochi mkpali;
nkwalite mmebi ọbara;
nwere isi ọwụwa mgbe nile;
na mgbochi nke nsị nsí (nke anụ ahụ).
Normalization nke mgbali elu na-atụnye aka: canloloupe melon, ọgwụ, na cherry plum, goozberị, chervil, basil, epupụta epupụta, Mint, celandine.
Ugbu a na-agwa gị otu esi esi nri nri ọgwụgwọ a. Nke mbụ, anyị na-egosi ihe ndị dị mkpa maka jam, nakwa ụdị arịa na ngwá ọrụ dị mkpa.
1.5 kilogram nke mfri eke mfri;
1.5 kilogram shuga;
colander ma ọ bụ sieve maka ịsa tomato;
akpa na mkpuchi maka nri jam (igwe anaghị agba nchara);
onye na-ekpuchi ya maka iwepu ụfụfụ ahụ site na mgbidi ahụ n'oge nkwadebe ya;
ngaji maka ịgwakọta tomato;
igba ogwu 0,5 liter Ololo;
sterilized canning lids;
Ị ma? Ihe dị ka osisi 1,400 bụ ndị ezinụlọ Solanaceae, otu osisi nke nightshade nwere ike ịmepụta ihe karịrị puku iri atọ na mkpụrụ kwa oge.
Nzọụkwụ - nzọụkwụ site nzọụkwụ iji kwadebe ngwaahịa ahụ:
Iji bulie mkpụrụ osisi si na epupụta mkpụrụ osisi ndị a kụrụ akpa, ma ọ bụ mkpụrụ osisi na-adịghị acha mkpụrụ osisi, itinye ya na sieve ma ọ bụ colander, na ịsacha mmiri. Ka mmiri kpochaa kpamkpam.
Wunye sugar na ala nke pan ma rata ya na ngaji iji mee ka oyi akwa ihe dị ka 1 cm.
Mgbe ahụ wụsa oyi akwa nke tomato na akwa shuga ma mee ka ha dị mma.
Ihe ọzọ shuga na tomato, na-edozi ha na ngaji.
Wụsaa n'elu oyi akwa nke tomato na akwa shuga ma dozie elu.
Kpuchie ma hapụ ka ị mata ihe ọṅụṅụ maka awa 8-10.
Mgbe oge a gasị, jikọta tomato na mmiri a tọhapụrụ na ihe ndị fọdụrụ na shuga adịghị etisasị.
Tinye akwa ọkụ ma gbanye ọkụ n'etiti, na-akpali nchịkọta ahụ.
Site na oge esi nri, belata okpomọkụ na esi nri maka minit 20-30, na-akpali ya mgbe niile ma na-ewepụ skimmer skimmer na skimmer.
Wụchaa ihe eji megharịa ọnụ n'ime ite ite ma jiri ha na-eji soda na sie canning lids.
Video: Strawberry Jam
Ọ dị mkpa! Nightshade dị nnọọ elu na calorie - ihe dịka kilocaloka 220 maka 100 grams nke ngwaahịa a, ya mere, iji oge nri a eme ihe abụghị ihe na-achọsi ike maka ndị na-achọ ibu ibu.
Iji mee ka mmetụta ọgwụgwọ nke nightshade jam dị n'ahụ gị, nakwa iji meziwanye uto ya, ị nwere ike ịkwadebe ihe oriri a na mgbakwunye na ngwaahịa ndị ọzọ bara uru, dị ka lemon peel na quince. N'okpuru ebe a bụ ntụziaka maka ịme eji megharịa ọnụ na ngwakọta nke ihe ndị dị n'elu.
Anyị na-akwado gị ka ị mara nke ọma na ntụziaka maka ịme mkpụrụ, Mandarin, blackthorn, hawthorn, goozberị, ugu, ube, na-acha ọcha udara, quince, Manchurian, ọbara ọbara currant na ntụ ọka strawberry jam.
Ngwakọta nke ngwaahịa:
1 kilogram nke mkpụrụ osisi nke nightshade;
1 kilogram nke sugar granulated;
1 lemon peel, grated on a fine grater;
ihe ọṅụṅụ nke 1 lemon;
1-2 akpa vanilla shuga.
Dee tomato, kpochaa n'okpuru mmiri na-agba agba ma kwe ka mmiri kpoo.
Ghaa mkpụrụ osisi ahụ na pan ma jikọta ya na shuga. Kwenye ka awa iri.
Mee ka ihe dị n'ime pan ma sie nri 2-3 maka nkeji 5, nkeji awa ise n'agbata doses, edemede mgbe niile ma wepụ ụfụfụ ahụ.
N'okpuru ikpeazụ, gbakwunye lemon peel, gwakọtara ya na ọka dị mma, na ihe ọṅụṅụ na-esi na ya pụta.
Tupu iwepụ ya na ọkụ na ngwaahịa a rụchara, ọ dị mkpa iji tinye vanilla shuga ma kpoo ihe niile.
Wunye jam n'ime ite ma tụgharịa.
Ọ dị mkpa! Na mfri eke tomato nke nightshade, ihe na-emerụ ahụ solanine na-anọghị ya, ya mere, ọ ga-ekwe omume iri mkpụrụ osisi zuru ezu.
1 kilogram nke nightshade;
1.5 iko nke mmiri dị ọcha;
6 iberibe quince mkpụrụ nke na-ajụ size;
1 mkpịsị aka nke barberry tomato (nhọrọ);
ihe na-egbu mgbu na mma.
Nzọụkwụ site nzọụkwụ:
Mkpụrụ osisi iji dozie, na-asa n'okpuru mmiri na-agba agba na colander wee hapụ akọrọ.
Na-asa quince, bee, grate na grater grater.
Na-asa lemon ma na-agbagharị na anụ grinder tinyere zest.
Na-eme ka a na-eri nightshade, na-eme ka a gụchaa ya, na-emegharị lemon ma gbakwunye mkpụrụ osisi nke barberry.
Hapụ inyefe maka awa ise.
Tinye shuga, wukwasi mmiri, gbakọọ ma sie nri nkeji iri atọ karịa okpomọkụ.
Wepụ si na ikpo ọkụ ma kwe ka ị kwụrụ maka awa 12 ọzọ.
Mgbe oge a kapịrị ọnụ, gbanye ọkụ ma gbanye 30 nkeji ọzọ.
Ná ngwụsị nke nri tinye vanilla.
Wụchaa ihe ọkụkụ dị na ndagwurugwu ma tụgharịa.
Na-agụ otú e si kwadebe maka oyi compote cherị, ihe ọṅụṅụ si mkpụrụ vaịn, ọbara ọbara currant jelii, currants na watermelons.
Mfe dịka ntụziaka ndị a dị n'elu na-adịkarị nwayọọ ma na-esi ísì ụtọ. Enwere ike iji ya ma ọ bụ n'ụdị ya dị ọcha, tii ma ọ bụ mmiri ara ehi, ma ọ bụ gbakwunyere dị ka ihe jupụtara na pies, curd casseroles, ọbọp na pancakes dị mkpa ma gbakwunye na desserts na ice cream.
Ọ dị mkpa! Nkwekọrịta maka iji ọgwụ ọjọọ eme ihe site na nightshade bụ mmadụ enweghị ndidi, ụmụaka dị n'okpuru afọ 5, ime ime na ịkwa ahụ.
Ya mere, ọ bụghị nanị na ọ bụ naanị ọgwụ ọhụrụ ka a na-eji mee ihe maka ọgwụgwọ, kama ọ na-atọkwa ụtọ desserts. Gbalịa mee ka jam si na tomato ndị a dị ka ntụziaka anyị, ị ga-ahụ na iji ya ga-eme ka ahụike gị dị mma.
Ndị Nepentes - nlekọta ụlọ, foto na nkọwa nke ihe ọkụkụ
Onye na-amanye mkpụrụ osisi na-ekwenye ekwenye dị iche iche "King London": nkọwa, njirimara, ndụmọdụ maka nlekọta
Esi zụọ ụmụ ehi maka uto ngwa ngwa